tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-11
Rehefa velomina amin'ny resina thermoset ny lamba, dia mifoka resina ilay lamba ary miakatra hatramin'ny haavon'ny preset. Noho ny firafitra mitambatra, ny fitambaran-javatra vita amin'ny lamba vita amin'ny sandwich 3D dia mirehareha amin'ny fanoherana ambony kokoa amin'ny delamination amin'ny tantely tantely sy volon-koditra vita amin'ny tratra. Prod ...
3-D fanamboarana lamba spacer dia hevitra vao novolavolaina. Ny tontolon'ny lamba dia mifamatotra mafy amin'ny alàlan'ny kofehy mitsivalana mitsivalana izay mifangaro amin'ny hoditra. Noho izany, ny lamba spacer 3-D dia afaka manome fanoherana ny fihodinan'ny hoditra, ny faharetana ary ny superio ...
Tady voatetika fibre de verinia
Fiberglass voatetika kofehy ao anatin'izany kofehy voatetika ho an'ny BMC, kofehy voatetika ho an'ny thermoplastika, kofehina voatetika lena, kofehy voatetika Alkali (ZrO2 14,5% / 16.7%). 1) .Toro voatetika ho an'ny BMC voatetika kofehy ho an'ny BMC dia mifanaraka amin'ny polyester tsy miangona, ny epoxy resin ary ny phenolic resi ...
Mat Tissue tsy misy rano
Ny lambam-baravarankely dia ampiasaina indrindra ho substrates tsara ho an'ny fitaovana tafo tsy misy rano. Izy io dia miavaka amin'ny tanjaka avo lenta, ny fanoherana ny harafesina, ny fandosiran'ny godorao mora foana, sns. Ny tanjaky ny lavareny sy ny fanoherana ny ranomaso dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny fampidirana fanamafisana ...
CSM E-Glass Chaded Strand Mat dia lamba tsy mendri-kaja izay misy tsatokazo voatetika tsy tapaka notazonina miaraka amina vovoka / emulsion. Izy io dia mifanaraka amin'ny resins UP, VE, EP, PF. Ny sakan'ny horonana dia eo anelanelan'ny 50mm ka hatramin'ny 3300mm, ny lanjan'ireo dia 100gsm ka hatramin'ny 900gsm. Ny sakany mahazatra1040 / ...
Varavarana FRP / Fiberglass Door / SMC Door
Ny varavarana Shibro Beihai Fiberglass (varavarana FRP) dia be dia be azo ampiasaina amin'ny modely maro. Izany dia ahafahana mampiasa azy ireo ho varavarana fidirana na varavarana fandroana ho an'ny trano, hotely, hopitaly, trano ara-barotra sns sns.
1.Ny voninkazo plastika nohamafisin'ny fibre dia azo antoka kokoa noho ny vilany voninkazo tsotra, ary maharitra kokoa noho ny vilany voninkazo tsotra izy io. Izy io dia afaka mitazona sy manala rano, solika ary ranon-javatra hafa mandritra ny fotoana maharitra, miaraka amin'ny fanoherana tsara ny famoahana rano. Ny felam-boninkazo FRP dia marefo amin'ny endriny, gre ...